“Horumarka Somaliland Waxaa Astaan u ah Dimuqraadiyad Degenaansho iyo Nabad” | Dhaymoole News
Washington (Dhaymoole)- Warbixin uu qoray mac-hadka arrimaha siyaasadda ee dalka Maraykanka (International Policy Diges) ayaa lagu sheegay in caalamku iska indho-taray Qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo raadinta madaxbannaanideeda, iyada oo ay Somaliland gobolka ka dhigtay mid xasilloon.
International Policy Diges ayaa warbixintiisa ku tilmaamay in Jamhuuriyadda Somaliland ay tahay dawlad siyaasad ahaan meeqaam weyn ku leh h horumarka gobolka geeska Afrika, sidoo kalena dimquraadiyadda ka hano-qaaday Somaliland iyo doorashooyinkii ugu dasmbeeyay ay muujinayaa ama tilmaamayaan qoto-dheeraanta istiraatijiyadeed iyo bisaylka siyaasadeeda arrimaha dibadda.
Warbixintan oo uu diyaariyay (Dave Primov oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha siyaasadda Afrika iyo Bariga-dhexe, isla markaana uu soo turjumay wargeyska Dawan waxay u qornayd iyadoo dhamaystiran sidan “Soddon sannadood ka dib markii ay ku dhawaaqday inay ka madax-bannaan tahay Soomaaliya, Jamhuuriyadda Somaliland waxay u muuqataa inay istaraatijiyad ahaan isu taagayso sidii ay dadaal xooggan ugu geli lahayd aqoonsi caalami ah. In kasta oo ay dhamaystirtay ku dhawaad qayb kasta oo dawladnimo.
Qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland iyo raadinta madaxbannaanideeda inta badan waa la iska indho tiray, iyada oo Somaliland ay gobolka ka dhigtay mid xasilloon, laakiin waa mid go’doonsan oo aan cod ku lahayn goleyaasha iyo doodaha caalamiga ah.
Dimoqraadiyadda dawladnimada Somaliland iyo siyaasadeeda arrimaha dibada ee xeeladaysan waxay hadda ka faa’iideysanaysaa xafiiltanka juqraafiyeed ee ka socda Geeska Afrika iyo gobolka Badda Cas. Balse in ay ugu dambayn guulaysan doonto weli ma cadda, laakiin kiis adag oo sharciyadeed, saaxiibo cusub oo awood badan, iyo mandaqadda qasan ee ay ku taallo, fursadaha Somaliland waxay u muuqdaan in ay si weyn u guulaysanayso.
Somaliland waxay ku dhawaaqday inay ka madax-bannaan tahay Soomaaliya bishii May sannadkii 1991-kii, haddana waa dawlad madax-bannaan muddo ka badan intii ay la midowday Soomaaliya. Dareenka aqoonsiga qarannimo reer Somaliland waa mid sugan oo qoto dheer ujeedada laga leeyahay xaqiijinta madaxbanaanideeduna waa mid ka xoog badan sidii hore. Xitaa haddii aan la aqoonsanayn madaxbannaanida, suurtogalnimada dib ula midoobidda Soomaaliya aad ayay u yar tahay. Sidaa darteed, xuska 18 May oo ah sannad-guuradii ka soo -wareegtay midowgii Soomaaliya waxay u astaan u tahay daqiiqad muhiim ah oo dib u soo celineysa halgankii gobannimo-doonka Somaliland, iyo ansaxnimada qaddiyadeeda, heer caalami ah.
Dadka reer Somaliland waxay kaloo tilmaamayaan diiwaanka horumarka dimuqraadiyadeed oo saldhig u ah kala goynta Soomaaliya oo aan siyaasad ahaan degganayn. Tan iyo markii la ansixiyay dastuurka Somaliland 2001 -dii, waxaa dhacay siddeed doorasho oo guulaystay oo isugu jiray heer dawladaha hoose ilaa heer madaxweyne. Doorashada baarlamaanku waxay ahayd mid dhib badan.
Sannadkan, reer Somaliland sidaas ayay sameeyeen, iyagoo soo celiyay kalsoonidii hay’adaha dimoqraadiga ah waxayna keeneen jiil cusub oo hoggaamiyeyaasha Somaliland ah. Muddo aan dheerayn ka dib dabbaaldegyadii maalinta xorriyadda, waxaa la qabtay doorashooyinkii baarlamaanka oo muddo dheer dib u dhacay, oo ah geeddi-socod ay si weyn u ammaaneen goobjoogayaasha Afrika iyo kuwa kale ee caalamiga ah oo ku tilmaamay xor, xalaal, oo lagu kalsoonaan karo. Intaa waxaa dheer, labada xisbi mucaarad, Waddani iyo UCID, ayaa si wada jir ah ugu guulaystay kuraasta ugu badan, taas oo astaan ​​u ah in awooddii laga wareejiyay xisbiga talada haya ee Kulmiye. In kasta oo isbeddelka siyaasadeed ee dabeecaddan laga yaabo inuu colaad ka dhex dhaliyo qaar ka mid ah dalalka la deriska ah Somaliland, haddana horumarkan waxaa astaan ​​u ahaa nabad iyo deggenaansho markii dawladda cusub la wareegtay awoodda. Guusha doorashadii dhowaan waxay si weyn uga duwan tahay Soomaaliya, oo bilihii la soo dhaafay ku dhexjirtay qalalaase doorasho oo aakhirkii sababtay isku dhacyo rabshado wata oo dhex maray maleeshiyo beeleedyo iyo ciidamada ammaanka waddooyinka Muqdisho.
Ka sokow horumaradaas siyaasadeed ee gudaha, Somaliland waxay leedashay siyaasad dibadeed oo istiraatiiji ah, iyada oo la dhisaysa isbahaysiyo dhaqaale iyo siyaasadeed oo leh door awood badan kuwaas oo aakhirka taageeri kara qadiyadeeda aqoonsi caalami ah. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, Somaliland waxay ku dhex jirtey duufaan dhaqdhaqaaq juquraafiyadeed oo la xidhiidha labada gobol iyo kuwa waaweynba. Deggenaanshaha iyo xuddunta juquraafiyadeed ee ay ku taallo ee fagaaraha weyn ee Badda Cas ayaa ka dhigay hanti.
Waxay si istiraatiiji ah u aragtay inay dhexda ka gashay loollanno waaweyn oo caalami ah – sida khilaafka Khaliijka Faaris, loolanka Shiinaha iyo Taiwan, iyo iskahorimaadyada gobolka ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Masar – waxayna u adeegsatay xifaaltankaas sidii ay u sii horumarin lahayd ajandaha siyaasadda dibadda. Somaliland waxay aragtay hawlgal dhaqaale oo aan la qiyaasi karin oo ka socda Imaaraadka, iyada oo shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay Dubai ay $ 442 milyan gelisay Dekedda Berbera, oo ah xarunta ganacsiga Somaliland ee gacanka Cadmeed. Diblumaasiyad ahaan, Somaliland waxay xidhiidh rasmi ah la yeelatay Taiwan, oo kaliya ku leh Afrika saaxiib (Eswatini), halka ay diiday taageerada Shiinaha, oo ah tallaabo geesinimo leh oo ay u qaadayso hay’ad aan la aqoonsan oo taageero ka raadsanaysa beesha caalamka. Waxa kale oo ay Somaliland xoojisay xidhiidhkii ay la lahayd Kenya, iyada oo ballaadhisay xidhiidhkii ay la lahayd ummadaha kale ee Afrika ee Saxaraha ka hooseeya.
Intii ay waxan oo dhan samaynaysay, Somaliland waxay muujisay heer wakaalad oo aan hore loo arag, iyada oo ka faaiidaysanaya awoodda ay leedahay si ay horumar macno leh ugu samayso himiladeeda aqoonsiga iyo madaxbannaanida. Doorashooyinka Somaliland waxay tilmaamayaan qoto-dheeraanta istiraatijiyadeed iyo bisaylka siyaasadda arrimaha dibadda. Siyaasad ahaan maqaamkeeda, Somaliland waxay mid door-weyn ku leh horumarka gobolka.
Si kastaba ha ahaatee, guulaha dimuqraadiyadeed ee Somaliland ee dhawaanahan, guulaha muhiimka ah ee madaxbannaanida, iyo si weyn u kordhinta joogitaanka caalamiga ah ayaa calaamad u ah isbeddellada dawladda iyada oo doonaysa inay fiiro gaar ah u yeelato qaddiyadda madax-bannaanideeda adduunka oo dhan. Gobol ay colaado ka aloosan yihiin Itoobiya, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan, iyo Yemen, Somaliland waxay u taagan tahay inay tahay dal nabdoon oo xasilloon, oo sababtiisa ay adag tahay inaan loo naxariisan. Wadahadallada aan la soo koobi karin ee aan la yeeshay muwaadiniinta iyo saraakiisha reer Somaliland, hawadan rajada wanaagsan ee mustaqbalkoodu waa mid nool oo wanaagsan. Somaliland hadda kama aha raadaarka beesha caalamka oo kaliya, laakiin waa markab juquraafiyadeed, oo xooggeedu korayo, oo mawjadaha ka samaynaya geeska Afrika iyo xeebaha Badda Cas. Isbeddel ayaa ku socda jamhuuriyaddan iskeed isku magacowday; isha ku hay Somaliland.”